के तपाईलाई से’क्सको लत बसेकाे छ? यदि हाे यस्तो हुनसक्छ! जानीराखाैं – KhabarTime
के तपाईलाई से’क्सको लत बसेकाे छ? यदि हाे यस्तो हुनसक्छ! जानीराखाैं
हामीले निकोटिन, र’क्सी र लागुऔषधजस्ता नशालु पदार्थको लतलाई स्विकार गरेका छौं । यसले पुर्याउने क्षतीलाई पनि स्विकारेका छौं । तर यदि से’क्सको लतको कुरा आए विशेषज्ञको धारणा बाँडिएको छ । केहीले से’क्सको लतलाई स्विकारेका छन् भने कतिले अस्विकार गर्दै आएका छन् । से’क्सको लतलाई अहिले रोगको रुपमा लिइएको छैन त्यसकारण कति मानिसले यसका लागि चिकित्सकीय परमार्श मागेका छन्, यसको कुनै आधिकारिक डेटा पनि उपलब्ध छैन ।
पोर्न र से’क्सको लतसँग जुधिरहेकाको मद्दतका लागि विकास गरिएको वेबसाइटले ब्रिटेनमा २१ हजार मानिसमाथि सर्वेक्षण गर्यो । यी मानिसहरुले सन् २०१३ पछि वेबसाइटसँग मद्दतका लागि सम्पर्क गरेका थिए । यीमध्ये ९१ प्रतिशत पुरुष थिए र १० ले मात्र आफ्नो समस्याका लागि डाक्टरसँग परामर्श लिएका थिए ।
से’क्सको लतलाई सन् २०१३ को ‘डाइग्नोस्टिक एण्ड स्टेटिस्टिकल म्यानुअल अफ मेन्टल डिसअर्डर्स (डीएसएम) मा समावेश गर्नेबारे विचार गरिएको थियो तर प्रमाणको अभावका कारण यसलाई समावेश गरिएन । डीएसएम अमेरिका र ब्रिटेनको एक महत्वपूर्ण डाइग्नोस्टिक टूल हो ।
तर अब कम्पल्सिव से’क्सुअल बिहेबियर (बाध्यात्मक यौ’न व्यवहार) लाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको तर्फबाट जारी हुने म्यानुअल इन्टरनेशनल क्लासिफिकेशन अफ डिजिज (आइसीडी) मा समावेश गरिनेमा विचार गरिँदैछ ।
नयाँ प्रमाण सार्वजनिक भएपछि जुवा खेल्ने लत र धेरै खाने लतलाई पनि सन् २०१३ मा रोगको रुपमा स्विकार गरिएको थियो । सुरुमा जु’वालाई पनि बाध्यात्मक व्यवहार नै मानिन्थ्यो । थेरापिस्टको मान्यता अनुसार से’क्सको लत पनि यसरी नै समावेश हुनसक्छ ।
एक अनुसन्धानका अनुसार से’क्सका लतका शिकार कोही व्यक्तिले जब पोर्न हेर्छ उनको दिमागमा त्यस्तै गतिविधी पैदा हुन्छ जुन कुनै नशाको लतका शिकार व्यक्तिको दिमागमा लागुऔषध देख्दा हुन्छ ।
से’क्सको लत के लाई भन्ने यसको कुनै निर्धारित आधिकारिक व्याख्या छैन ।
मनोवैज्ञानिक डा. हेरियट गेराडका अनुसार कुनै व्यवहारले व्यक्ति र उ वरिपरिको वातावरणलाई क्षती पुर्याउँछ तब यो लत बन्छ । जुवा खेल्ने र अत्यधिक खाने लतलाई रोगको रुपमा मानिएको छ तर से’क्सको लतलाई होइन किनभने त्यो जनमानसमा लामो समयदेखि विद्यमान छ । यसको अर्थ यो हो कि जुवा र अत्यधिक खाने मामलामा अन्य मानिसहरु पनि मद्दतका लागि तम्सिएका हुन्छन् जसले उनीहरु रोगी भएको समर्थन गर्छ र थप प्रमाण प्राप्त हुन्छ ।
डा. अबिगेल सान क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हुन् जसको मान्यता अनुसार कसैलाई से’क्सको लत लागेको पनि हुनसक्छ । जो व्यक्तिले से’क्सको भावनालाई नियन्त्रण बाहिर भएको महसुस गरिरहेका छन्, यो कुनै अन्य लुकेको समस्याका कारण पनि हुनसक्छ । कसैले मोटोपना, चिन्ता र आघातबाट बाहिरिनका लागि पनि से’क्सको सहारा लिइरहेको हुनसक्छ ।
यद्यपी, उनी से’क्सलाई लत मानेपछि यसले मानिसहरुको मद्दत गर्नेछ भन्ने विषयमा सन्तुष्ट छैनन् विशेषगरी ती व्यक्तिको जसले से’क्सको प्रयोग अन्य समस्याबाट बाहिरिनका लागि गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार यसले ओभर डाइग्नोसिसको समस्या पैदा हुनसक्छ अर्थात् गलत औषधी दिइनेछ वा लक्षणलाई राम्रो तरिकाले विश्लेषण गरिँदैन ।
के से’क्सको लत मिथ हो ?
से’क्सको लत एक वास्तविक रोग हो भन्ने बारे धेरैले अस्विकार गर्दै आएका छन् । ‘द मिथ अफ से’क्स एडिक्शन’ किताब लेख्ने से’क्स थेरापिस्ट डेविड ले भन्छन्, ‘साधारणतया से’क्सको लत मानिने व्यवहार वास्तवमा मूड र कुण्ठासँग जोडिएको समस्याको उपचार नगराएको लक्षण हो ।’ उनी थप्छन्, ‘से’क्स वा हस्तमैथुनलाई र’क्सी वा ड्रग्सजस्तै मान्नु सही होइन । र’क्सीको लतको शिकार मानिसहरुले र’क्सी छोड्दा मृत्यु पनि हुनसक्छ ।’
‘से’क्सको लतको धारणा स्वस्थ यौ’न सम्बन्धसँग के छ त्यससँग जोडिएको नैतिक मूल्यमा आधारित छ ,’ उनी भन्छन् । ‘यदि तपाईं आफ्ना थेरापिस्टको धारणाभन्दा धेरै र भिन्न तरिकाले से’क्स गरिरहनुभएको छ भने उनको नजरमा तपाईंलाई से’क्सको लत छ ।’ रचेल श्रायल /बीबीसी
पूर्व साँसद तथा एसटिसि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धर अस्पताल भर्ना!
टाउकाे दुखेर बाइकमा अस्पताल गएकि संजिता अब कहिल्यै नफर्किने भइन्! इजरायलमा दुःख गरेर फर्केपछिको सुखकाे सपना अस्तायो!